Safiirkii Somalia u fadhiya Turkiga iyo qoyskiisa oo goostay iyo dowlada Holand oo dib u soo celisay | Salaan Media
Safiirkii Somalia u fadhiya Turkiga iyo qoyskiisa oo goostay iyo dowlada Holand oo dib u soo celisay
Safiirkii dowlada federaalka Somalia u fadhiyey magaalada Ankara ee dalka Turkiga Maxamed Mursal Shiikh C/raxmaan iyo qoyskiisa ayaa u goostay dalka Holand, iyadoo dowlada Holand ay dib ugu celisay dalka Holand.
Warar ku dhow dhow Wasaarada arrimaha dibeda Somalia ayaa sheegaya in safiirka oo ay la socdaan xaaskiisa iyo lix caruur ah oo uu dhalay ay ka dhoofeen dalka Turkiga iyagoo doonayey iney qaab dalxiis ahaan ah ku galaan dalka Holand si ay markaa ka dib halkaa qaab qaxootinimo ah isaga dhiibaan.
Hase ahaatee ciidamada Booliska dalka Holand ayaa gartay ujeedada safiirka iyo qoyskiisa ay u tageen dalkaas inaaney aheyn dalkxiis balse ay u socdaan arrimo kale, iyagoo markaa ka dibna dib ugu celiyey dayuuradii ka keentay magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
Macluumad la helayo ayaa sheegaya in dib u soo celinta safiirka iyo qoyskiisa ay ka dambeysay xiriir dhexmaray wasaaradaha arrimaha dibeda ee Somalia iyo Holand.
Xubno ka tirsan safaarada Soomaalida ee dalka Turkiga ayaa sheegay in safiirka iyo qoyskiisa oo weji gabax uu ka muuqdo ay dib ugu soo laabteen magaalada Ankara ka dib markii ay ku hangoobeen damacoodii ahaa iney u goostaan kuna noolaadaan dalka Holand.
Safiirka ayaa la sheegay inuu talaabadan qaaday ka dib markii uu maqlay warar sheegaya in xilka laga qaadayo, inkastoo uusan jirin war sheegaya in xilka laga qaaday oo ka soo baxay wasaarada arrimaha dibeda Somalia, waana markii ugu horeysay ee safiir ka tirsan dowlada Somalia uu ka dhaqaaqo talaabadan oo kale.